CBR ဖိုင်များဖွင့်နည်း - VidaBytes | LifeBytes
Iris Gamen | 23/06/2022 20:00 | applications များ
မတူညီသောအွန်လိုင်းပလပ်ဖောင်းများတွင် ကျွန်ုပ်တို့ရှာဖွေနိုင်သည့် ဒစ်ဂျစ်တယ်ဖိုင်များကို PDF၊ Word၊ JPG သို့မဟုတ် ၎င်းတို့ကို သင်ပထမဆုံးအကြိမ်တွေ့မြင်နိုင်ပြီး အချို့သောအပလီကေးရှင်းများဖြင့်သာဖွင့်နိုင်သည့် မတူညီသောစက်ပစ္စည်းများမှတစ်ဆင့် ခံစားနိုင်သည်။ ယနေ့ကျွန်ုပ်တို့သည် CBR ဖိုင်များကိုမည်သို့ဖွင့်ရမည်အကြောင်းပြောပါမည်။တော်တော်များများ သိပြီးသားဖြစ်မှာပါ၊ ၎င်းတို့သည် သီးခြားအပလီကေးရှင်းများကို အသုံးပြု၍ ကြည့်ရှုနိုင်သည့် မတူညီသောပုံများပါရှိသော ဖိုင်များဖြစ်သည်။
ဤဖိုင်အမျိုးအစားသည် ရုပ်ပြလောကနှင့် အဓိကသက်ဆိုင်ပါသည်။အခြားဖိုင်အမျိုးအစားများတွင် တွေ့နိုင်သော်လည်း၊ အကယ်၍ သင်သည် ရုပ်ပြများကို နှစ်သက်သူတစ်ဦးဖြစ်ပါက၊ သင်သည် ၎င်းတို့ကို တစ်ကြိမ်ထက်ပို၍ ခံစားချင်နေမည်မှာ သေချာသော်လည်း CBR ဖိုင်ကို မည်သို့ဖွင့်ရမည်ကို သင်မသိသေးပါ၊ ဤထုတ်ဝေမှုတွင် ကျွန်ုပ်တို့ပေးမည့် လှည့်ကွက်များကြောင့် ၎င်းသည် အဆုံးသတ်သွားမည်ဖြစ်သည်။
1 CBR ဖိုင်တွေက ဘာလဲ။
2 Windows တွင် CBR ဖိုင်များကိုဖွင့်ရန် ပရိုဂရမ်များ
3 Mac တွင် CBR ဖိုင်များကိုဖွင့်ရန် ပရိုဂရမ်များ
4 Android သို့မဟုတ် IOS တွင် CBR ဖိုင်များကိုဖွင့်ရန်အက်ပ်များ
CBR ဖိုင်တွေက ဘာလဲ။
ဤ CBR ဖိုင်များသည် ကျွန်ုပ်တို့ တစ်ကြိမ်ထက်ပို၍ တွေ့ဖူးကြလိမ့်မည်၊ ဖိသိပ်ထားသော စာရွက်စာတမ်းများ အတွဲလိုက်၊ ZIP သို့မဟုတ် RAR၊ CBR ဖိုင်များ၏ အဓိက ကွဲပြားချက်တစ်ခုမှာ ဤအရာများဖြစ်သည်။ ပုံများ၏ အစီအစဥ်များဖြင့် ပြည့်နှက်နေသော ဇာတ်လမ်းများ ပါဝင်သည်။ ဤပုံများကို သတ်သတ်မှတ်မှတ် အစီအစဥ်ဖြင့် ထားရှိထားပါသည်။ဒါမှ သူတို့ပျော်ရွင်တဲ့အခါ စနစ်တကျလုပ်ပါ။
ထုတ်ဝေမှုအစတွင် ကျွန်ုပ်တို့ညွှန်ပြထားသည့်အတိုင်း ပုံမှန်အားဖြင့် CBR ဖိုင်များကို ဒစ်ဂျစ်တယ်ရုပ်ပြအဖြစ် သိမ်းဆည်းရန် အသုံးပြုပါသည်။ ၎င်းသည် ဖော်မတ်တစ်ခုဖြစ်ပြီး၊ ဖြည်ချသည့်အခါတွင် မည်သည့်ချို့ယွင်းချက်ကိုမျှ မတင်ပြပါ။ WinZip ကဲ့သို့သော ၎င်းအတွက် သီးခြား application များဖြင့်။
ဤဖိုင်ဖော်မတ်ကို ဖန်တီးသူမှာ 90s များတွင် ပြဿနာမရှိသော ရုပ်ပြများကို ကြည့်ရှုနိုင်သည့် ဆော့ဖ်ဝဲကို ဖန်တီးခဲ့သူ David Ayton ဖြစ်ပြီး၊ ဤဆော့ဖ်ဝဲမှာ CDisplay ဖြစ်သည်။. ဤပရိုဂရမ်အသစ်ကို စတင်လိုက်ခြင်းသည် ယနေ့အထိ ရှိပြီးသား ရုပ်ပုံများကို ကြည့်ရှုခြင်းကမ္ဘာအတွက် ကြီးမားသော တော်လှန်ရေးတစ်ခုဖြစ်သည်။
CDisplay ကြောင့် ရုပ်ပုံများ၏ အပိုင်းများကို ကြည်လင်ပြတ်သားစွာ ဖန်သားပြင်ပေါ်တွင် မြင်တွေ့ခဲ့ရသည်။z၊ စာမျက်နှာများကြားတွင်ဖော်ပြထားသော စွန့်စားခန်းများကိုဖတ်သည့်အခါ အမှတ်အသားပြုထားသည့် အမှာစာကို အမြဲလေးစားလိုက်နာသော အရည်အသွေးနှင့် အသေးစိတ်အချက်များ။
ဤဖိုင်အမျိုးအစား၏ ပုံမှန်အတိုကောက် “CB” သည် CDisplay ဆော့ဖ်ဝဲလ်ကို အသုံးပြု၍ ဖွင့်နိုင်စေရန် အထူးဖန်တီးထားသည့် ဖော်မတ် Comic Book မှ ဆင်းသက်လာသည်။ အဲ့အချိန်​မှာ ဤဖိုင်များကို သင်ဒေါင်းလုဒ်ဆွဲခြင်း နောက်ဆုံးစာတွင်ကြည့်ပါ၊ ၎င်းသည် အသုံးပြုပြီးသော ချုံ့မှုအမျိုးအစားကို ရည်ညွှန်းသည်။ဆိုလိုသည်မှာ၊ ၎င်းသည် RAR ဖိုင်မှတစ်ဆင့် .cbr ပေါ်လာမည်ဖြစ်ပြီး အခြားတစ်ဖက်တွင် ၎င်းသည် ZIP ဖြစ်ပါက ဖိုင်သည် .cbz ဟူသောအမည်ဖြင့် ပေါ်လာမည်ဖြစ်သည်။
ရှေ့ဆက်ရန် သို့မဟုတ် သင်နှစ်သက်သော ရုပ်ပြဇာတ်လမ်းများကို စတင်ခံစားရန် အဆင်သင့်ဖြစ်နေပါက၊ ဤဖိုင်အမျိုးအစားကို ဒေါင်းလုဒ်လုပ်ပြီး ဖွင့်ရန် အကောင်းဆုံး ပရိုဂရမ်အချို့ကို သင့်အား ကျွန်ုပ်တို့ ယူဆောင်လာပါသည်။ ရိုးရှင်းပြီး အမှားအယွင်းကင်းသော နည်းလမ်းဖြင့် နောက်အပိုင်းတွင်။ အဆိုပါ Windows အသုံးပြုသူများအတွက်သာမက Mac အသုံးပြုသူများအတွက်ပါ ဖော်ပြထားသည့် ပရိုဂရမ်များကို ကျွန်ုပ်တို့ မြင်တွေ့ရမည်ဖြစ်သည်။ Android နှင့် IOS နှစ်မျိုးလုံးအတွက် မိုဘိုင်းအက်ပလီကေးရှင်းများအပြင်၊
Windows တွင် CBR ဖိုင်များကိုဖွင့်ရန် ပရိုဂရမ်များ
အကယ်၍ သင်သည် Windows အသုံးပြုသူတစ်ဦးဖြစ်ပြီး သင် CBR ဖိုင်များကို သင်မည်သို့ဖွင့်နိုင်သည်ကို သိရှိလေ့လာလိုပါက၊ ကျွန်ုပ်တို့ဖော်ပြမည့် အောက်ပါပရိုဂရမ်များထဲမှ တစ်ခုကို သင်ရနိုင်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည် ဤအစီအစဉ်ကို ကျွန်ုပ်တို့၏စာရင်းတွင် မဖော်ပြထားဘဲ ဤဖော်မတ်အမျိုးအစားနှင့် ၎င်းနှင့်အနီးတစ်ဝိုက်ရှိ အရာအားလုံးကို လုပ်ဆောင်ရန် စိတ်ကူးအတွက် ဖန်တီးသူကို ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ CDisplay၊ ၎င်းသည် ကွန်ပျူတာများအတွက် အလွန်ရိုးရှင်းသော ပရိုဂရမ်တစ်ခုဖြစ်သော်လည်း တစ်ချိန်တည်းတွင် အလွန်ထိရောက်သည်။ ၎င်းသည်လုံးဝအခမဲ့ဖြစ်သည်ကိုမမေ့ပါနှင့်။
၎င်းသည် အထူးပြုလုပ်ထားသည့် အစီအစဉ်ဖြစ်ပြီး ရုပ်ပြချစ်သူများ၏ အကြိုက်များထဲမှ တစ်ခုဖြစ်သည်။. ၎င်းသည် PDF၊ CBR၊ CBZ ကဲ့သို့သော မတူညီသော formats များကိုဖတ်နိုင်ခြင်းကြောင့် အံ့သြဖွယ်ကောင်းသော စာဖတ်ခြင်းအတွေ့အကြုံကို ပေးဆောင်ပါသည်။ ရုပ်ပြများကို အရည်အသွေးမဆုံးရှုံးဘဲ စက္ကန့်ပိုင်းအတွင်း တင်ပေးပြီး အသေးစိတ်အချက်အလတ်အားလုံးကို လေးစားပါသည်။
CBR ဖိုင်များကိုဖတ်ခြင်း၏စည်းကမ်းချက်များ၌အခြားကောင်းသောပရိုဂရမ်များ ကွန်ပြူတာတွင် ကာတွန်းများဖတ်ရန် ညွှန်ပြထားသည်။. ဤဆော့ဖ်ဝဲလ်ဖြင့်၊ ရုပ်ပြစာမျက်နှာများကြားတွင်ပြောသောပုံပြင်များကို သင်ခံစားနိုင်ရုံသာမက ဒစ်ဂျစ်တယ်အကြောင်းအရာကို တည်းဖြတ်နိုင်သည်။
သူတို့ရဲ့ ဖိုင်တွေကို မျှဝေတာကို မနာလိုတဲ့သူတွေအတွက် အပြုသဘောဆောင်တဲ့အချက်က အဲဒါပါပဲ။ Gonvisor သည် သင့်အား စကားဝှက်တစ်ခုဖြင့် သင်၏ဖတ်ရှုခြင်းစာရွက်စာတမ်းများကို ကာကွယ်ရန် ဖြစ်နိုင်ချေကို ပေးပါသည်။. ဤပရိုဂရမ်ကို တန်ဖိုးပေးသည့် ရွေးချယ်မှုတစ်ခု။
Mac တွင် CBR ဖိုင်များကိုဖွင့်ရန် ပရိုဂရမ်များ
သင်ရောက်ရှိနေသည့်အချိန်၌ Mac အသုံးပြုသူများသည် ရှုပ်ထွေးမှုမရှိဘဲ CBR ဖိုင်များကိုဖွင့်နိုင်သည့် မတူညီသောပရိုဂရမ်များကို ကျွန်ုပ်တို့တွေ့ရပါမည်။
ဤစာရင်းသို့ကျွန်ုပ်တို့ယူဆောင်လာသောဤပထမဆုံးပရိုဂရမ်ဖြင့်၊ သင်သည် CBR ဖိုင်များသာမက CBZ နှင့် PDF ဖိုင်များကိုလည်းဖွင့်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။ အလွန်ရိုးရှင်းသော အင်တာဖေ့စ်၏နည်းလမ်းအားဖြင့်၊ ၎င်းသည် သင့်အားပေးဆောင်သည့် အကြောင်းအရာအားလုံးကို လျင်မြန်စွာ လမ်းညွှန်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။. သင့်အားတင်ပြထားသည့် ပုံသေးများကြောင့် ၎င်းကို ပိုမိုလွယ်ကူစေသည်။
သူ့ရဲ့ အဓိက ဆွဲဆောင်မှုတွေထဲက တစ်ခုကတော့ အဲဒါပါပဲ။ စာမျက်နှာနှစ်ထပ်ဖတ်ရှုခြင်းနှင့်ကြည့်ရှုခြင်းကိုပံ့ပိုးသည်။. ဤဖော်ပြမှုရွေးချယ်မှုဖြင့်၊ ရည်ရွယ်ချက်မှာ စာမျက်နှာများကို ညာမှဘယ်ဘက်သို့ လက်ချောင်းများဖြင့် လှန်လိုက်သကဲ့သို့ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ရုပ်ပြဖတ်ခြင်းကို အတုယူရန်ဖြစ်သည်။ သင်သည် ဤပရိုဂရမ်ကို App Store မှ ယူရို 5.49 ဖြင့် သင့်စက်တွင် ရနိုင်ပါသည်။
ကျွန်ုပ်တို့ပြောခဲ့သည့်ပရိုဂရမ်များစွာနှင့်ကဲ့သို့ပင်၊ DrawnStrip Reader သည် CBR အပြင် အခြားဖော်မတ်အမျိုးအစားများနှင့်လည်း တွဲဖက်အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ CBZ၊ CB7။ CBT, ZIP, RAR စသည်တို့ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့ပြောနေသော ဤဆော့ဖ်ဝဲလ်သည် မြင်လွှာစခရင်များအတွက် အကောင်းဆုံးဖြစ်ပြီး၊ ၎င်းသည် သင့်အား ဤဖိုင်များကို အခြားဖော်မတ်များသို့ ပြောင်းရန်လည်း ဖြစ်နိုင်ချေကို ပေးပါသည်။
၎င်းသည် သင်နှစ်သက်သော ဖိုင်များမှ ပုံများကို ထုတ်ယူနိုင်ပြီး ၎င်းတို့ကို မျှဝေနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ အလွန်အပြုသဘောဆောင်သောအချက်မှာ ၎င်းသည် သင့်စိတ်ကြိုက်အရာများနှင့် လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင် အလင်းအမှောင်နှင့် အလင်းအမှောင်ချိန်ညှိမှုများကို ပေးဆောင်သည်။ စျေးနှုန်း 4.49 ယူရိုဖြင့် Apple Store တွင်ဝယ်ယူခြင်းဖြင့် DrawnStrip Reader ကိုသင်ရနိုင်သည်။
Android သို့မဟုတ် IOS တွင် CBR ဖိုင်များကိုဖွင့်ရန်အက်ပ်များ
ဤနောက်ဆုံးအပိုင်းတွင်၊ ဒေါင်းလုဒ် အမျိုးအစား သို့မဟုတ် ပြသမှု အမှားအယွင်းမရှိဘဲ ကျွန်ုပ်တို့၏မိုဘိုင်းစက်ပစ္စည်းများတွင် ဤဖိုင်အမျိုးအစားကို ခံစားနိုင်ရန် ဖော်ပြထားသည့် အပလီကေးရှင်းစီးရီးများကို ကျွန်ုပ်တို့တွေ့ရပါမည်။
Android စက်ပစ္စည်းများအတွက် စျေးကွက်တွင် သင်ရှာဖွေနိုင်မည့် အကောင်းဆုံးအက်ပ်များထဲမှတစ်ခုCBR နှင့် CBZ ဖိုင်နှစ်ခုစလုံးကို သင်ခံစားနိုင်သည်။ ၎င်းသည် ထိုနေရာတွင်ရှိနေရုံသာမက JPG၊ GIF၊ PNG သို့မဟုတ် BMP ကဲ့သို့သော အခြားဖော်မတ်အမျိုးအစားများနှင့်လည်း တွဲဖက်အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
၎င်းသည် လုံးဝအခမဲ့အပလီကေးရှင်းတစ်ခုဖြစ်သော်လည်း ကြော်ငြာအကြောင်းအရာပါရှိသည်။ထုပ်ပိုးထားသောအက်ပ်ကိုဝယ်ပါက သင်ဖယ်ရှားနိုင်သည့်အရာ။ ၎င်းသည် သင့်အား CBR နှင့် CBZ ဖိုင်များကို တိုက်ရိုက်ချုံ့နိုင်စေရုံသာမက ပုံများကို လွတ်လပ်စွာ ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်သည်ကို သတိပြုပါ။
IOS အသုံးပြုသူများအတွက် ကျွန်ုပ်တို့သည် သင့်အား ဤအရာကို ယူဆောင်လာပေးပါသည်။ CBR နှင့် CBZ ဖိုင်များကိုဖတ်ရှုနိုင်စေရန်အဓိကရည်ရွယ်ချက်မှာအလွန်ရိုးရှင်းသော application ဖြစ်သည်။ ၎င်းနှင့်အတူ၊ သင်သည် Dropbox၊ Drive၊ OneDrive အစရှိသည့် မတူညီသော ဒစ်ဂျစ်တယ်ဆိုက်များတွင် သိမ်းဆည်းထားသော ဖိုင်များကို ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။
မည်သည့်ဝဘ်ဆိုဒ်မှ ရွေးချယ်ထားသောဖိုင်များကို ဒေါင်းလုဒ်လုပ်ခြင်းသည် သင့်မိုဘိုင်းစက်ပစ္စည်းပေါ်တွင် တိုက်ရိုက်လုပ်ဆောင်ပါသည်။ ယခင်ကိစ္စများတွင်ကဲ့သို့၊ ၎င်းသည် Apple စတိုးတွင်ရရှိနိုင်သည့်လုံးဝအခမဲ့ application တစ်ခုဖြစ်သည်။
ယခုအချိန်အထိ၊ ရရှိနိုင်သော ပရိုဂရမ်များနှင့် အသုံးချပရိုဂရမ်များအတွက် မတူညီသော အဆိုပြုချက်များနှင့် ကျွန်ုပ်တို့၏စာရင်းတွင် ပါဝင်သောကြောင့် သင်သည် ရုပ်ပြလောက၏ စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ဇာတ်လမ်းများတွင် သင့်ကိုယ်သင် နှစ်မြှုပ်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။ သင်စတင်ဖတ်ရှုရန်၊ ဒေါင်းလုဒ်လုပ်ရန်၊ ထည့်သွင်းခြင်းနှင့် စတင်ခံစားလိုသည့်စက်ပစ္စည်းအလိုက် မည်သည့်ပရိုဂရမ် သို့မဟုတ် အက်ပ်လီကေးရှင်းကို ညွှန်ပြသည်ကို သင်သိရန်သာ လိုအပ်ပါသည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - LifeBytes » applications များ » CBR ဖိုင်များကိုဖွင့်နည်း
သတိမထားမိဘဲ Instagram ဇာတ်လမ်းတွေကို ဘယ်လိုကြည့်မလဲ။